Kevlar Goynta Laser, Fibers-yada Aramid, UHMWPE ee loogu talagalay Vests Bulletproof - Goldenlaser
Kevlar Goynta Laser, Fibers Aramid, UHMWPE oo loogu talagalay Vests Bulletproof
Goldenlaser waxay bixisaa Mashiinka goynta laser-ka ee CO₂ gaar ahaan loogu talagalay qalabka aan rasaastu karin, dharka UD, Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber (UHMWPE), Kevlar iyo aramid fibers
Ultra High Molecular Weight Polyethylene Fiber (UHMWPE), Kevlar, Aramid waa dhar loo isticmaalay in loogu sameeyo qalabka ilaalinta millatariga , booliska , iyo shaqaalaha amniga . Waxay leeyihiin awood sare, miisaan hoose, dheereyn hooseysa xilliga nasashada, iska caabinta kuleylka, iyo iska caabinta kiimikada.
UHMWPE, Kevlar iyo Aramid Fibers aad ayey ugu habboon yihiin goynta leysarka oo soo saaraya geesaha leysku shaqeynayo oo joogto ah iyo aagagga ugu yar ee kuleylka ay saameeyeen.
Goynta leysku waxay uumi bixisaa walxaha wadada jajaban, kana tagtaa gees nadiif ah oo xidhan . Dabeecadda aan lala xiriirin ee ka shaqeynta leysarka ayaa u oggolaaneysa codsiyada in lagu farsameeyo joomatari wanaagsan oo laga yaabo inay adkaato in lagu gaaro habab farsameed dhaqameed. Teknolojiyada ay soo saartay Golden Laser waxay ka dhigeysaa mid fudud in si isdabajoog ah oo si isdabajoog ah loogu socodsiiyo qalabkan si heer sare ah oo sax ah cabbir ah maxaa yeelay dabeecadda aan xiriirka laheyn ee ka shaqeynta leysarka ayaa baabi'ineysa qallooca maaddada inta lagu guda jiro howsha.
Goynta leysku sidoo kale waxay u oggolaaneysaa xorriyadda naqshadeynta ballaaran ee qaybahaaga oo leh awood u leh in lagu gooyo qaabab adag, qaabab isku dhafan oo qiyaas ahaan cabbir kasta leh.
Nidaamyada laser-ka soo socda ayaa lagula talinayaa dharka goynta leysarka ee qalabka difaaca:
CO2 Laser magaabay wiil JMCCJG250300LD
CO2 Laser magaabay wiil JMCCJG160300LD